Candied လိမ္မော်ခွံ - အမြန်ချက်ပြုတ်နည်းများ, အကြိုးခံစားခှငျ့, အန္တရာယ်နှင့်သိုလှောင်မှုအခြေအနေများ
Candied လိမ္မော်ခွံ - အိမ်လုပ်သကြားလုံးအဘို့အရသာနှင့်ကျန်းမာချက်ပြုတ်နည်းများ
နောက်တဖန်လိမ္မော်ခွံ, ဆိုဗီယက်ကာလ၏တီထွင်မှုစှဲခြှတောအိမ်ရှင်မ, လူကြိုက်များ Candied ။ ဒီအကြောင်းပြချက်, ၎င်းတို့၏သဘာဝအဇာစ်မြစ်, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အာဟာရဂုဏ်သတ္တိများနှင့်ပါဝင်ပစ္စည်းများတစ်စျေးပေါကုန်ကျစရိတ်။ တောင်မှစာရွက် Now ကိုမိနစ်အနည်းငယ်အဘို့အလိုချင်သောအခွအေနေမှထုတ်ကုန်ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်ပါတယ်, ချက်ပြုတ်ကြာချိန်တစ်ချိန်က scares ။
လိမ္မော်ရောင် peels ဘယ်လိုအသုံးဝင် candied?
လိမ္မော်ရောင်အခွံအကြိုးခံစားခှငျ့မြားနှငျ့ပျက်ဆီး Candied ကျန်းမာသောအစားအစာများ၏စိတ်ဝင်စားပရိသတ်တွေ, အစားအသောက်စားသုံးမှုစေနိုငျသော။ ကျနော်တို့အလွန်အကျွံစားသုံးမှုအကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်: ဗီတာမင်နှင့်ဖိုင်ဘာနှင့်အတူခန္ဓာကိုယ်ပြည့်နေပါသည်ရန်နှင့်အလွန်အကျွံရရှိဖို့မလုံလောကျ candied 50 ဂရမ်။ ချက်ပြုတ်သည့်အခါနိမ့်ဆုံးသကြားနောက်ထပ်သူတို့ရဲ့ကယ်လိုရီ content တွေကိုလျှော့ချဖို့ကူညီပေးပါမည်။
လုံ့လရှိသူ capacious ထုတ်ကုန်, မိုးသည်းထန်စွာအလုပ်သမားအတွက်စေ့စပ်လူတို့အဘို့အလွန်အသုံးဝင်သည်အရာ - လိမ္မော်ရောင်အခွံ Candied ။ ဒါကြောင့်အလုပ်မလုပ်ခြင်းနှင့်ခရီးသွားလာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများအတွက် lunchbox အတွက်အလွယ်တကူကိုက်ညီဒီတော့အခြားအရာများအနက်သူတို့က, ကျစ်လစ်သိပ်သည်းဖြစ်ကြသည်။
, မှန်မှန်ကန်ကန်အသုံးပြုသောအသီး candied အခါ, သငျသညျကိုလျင်မြန်စွာအပိုကီလိုဖယ်ရှားပစ်ရနိုငျသညျ။ သူတို့ဟာတ္ထုများအဆီ၏ပျက်ပြားစေရန်အထောက်အကူဖြစ်စေမဆံ့။
သကြားလုံး၏အလယ်အလတ်စားသုံးမှုကျန်းမာရေး, အရေပြား, ဆံပင် texture တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်နှင့် beriberi လက်မှငါတို့ကိုကယ်လွှတ်။
Candied လိမ္မော်သီး တစ် Citrus အသီးများအသုံးပြုခြင်း, ချပ်သို့ဖြတ်ခြင်းနှင့်မီးဖို၌အခြောက်ပါဝငျသညျ။ နောက်ထပ်အရာ - ထိုသကြားလုံး peels, ဘယ်မှာစွန့်ပစ်ထုတ်ကုန် - ခွံချိုမြိန်ရည်ပြုတ်တဲ့အရသာနှင့်ကျန်းမာအားရစရာသို့လှည့်။ အဆိုပါသာအနုတ်လက္ခဏာ - မလျော့နည်း 20 ထက်နာရီကိုင်ပြီးပြင်ဆင်မှု၏ရှည်လျားသောကာလ။
အခွံ - 1.5 ကီလိုဂရမ်;
သကြား - 1.7 ကီလိုဂရမ်;
ရေ - 750 ml ကို;
သံပုရာဖျော်ရည်ကို - 80 ml ကို;
powdered သကြား - 40 ဂရမ်
20 မိနစ်စင်ကြယ်သောရေ၌ပြုတ်။ strips တွေသို့ဖြတ်ယူပါ။
10 မိနစ်ရေနှင့်သကြားပြုတ်, သံပုရာဖျော်ရည်နှင့်အခွံထည့်ပါ။
5 နာရီကြာပြီးတဲ့နောက်နှင့် tomite နာရီပြန်သွားပါ။
အနည်းငယ် ajar မီးဖို၌ Drier ။
တစ်ချိန်ကဂန္သကြားထံမှသကြားလုံးလိမ္မော်ရောင် peels နှင့်အတူဖြန်း, အအေး။
candied လိမ္မော်ရောင် peels များအတွက်ရည်
candied လိမ္မော်ခွံ၏အဘိတ်ချက်ပြုတ်ရည်ပါဝငျသညျ။ ဒါဟာထုတ်ကုန်အရည်အသွေးများ၏ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုဟာ elastic အပေါ်ယံလွှာဆုံးရှုံးမည်ချိုမြိန်ခြင်းနှင့်အရည်သကြားထုတ်ကုန်မပေးပါဘူးသိပ်ထူပေါ်တွင်မူတည်သည်။3နှင့်မျှတသောအရသာများအတွက်သံပုရာဖျော်ရည်နှင့်နံ့သာမျိုးကို add: ဤကိစ္စတွင်မှာ, သကြားနဲ့ရေ 1 ဒအချိုးအစားကိုစောင့်ရှောက်ရန်အရေးကြီးပေသည်။
သကြား - 500 ဂရမ်;
ရေ - 1.5 ဌ;
သံပုရာဖျော်ရည်ကို - 60 ml ကို;
ကြယ်ပွင့် anise -2PCs; ။
vanilla bean ကို - 1 pc ။
vanilla bean ကိုနှင့် Dittany 10 မိနစ်နှင့်အတူပြုတ်။
Candied လိမ္မော်ခွံ - လွယ်ကူသောစာရွက်
ဂန္ထဝင်တစ်ဦးဂန္ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ express ကိုနည်းလမ်းအားဖြင့်ချက်ပြုတ်အိမ်မှာရရှိသော candied လိမ္မော်ရောင်ထက်မဆိုးရွားနာရီစုံတွဲတစ်တွဲကြာပါသည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, ဆားရေထဲမှာ provarivaya အကြိမ်ပေါင်းများစွာ, ရည်အတွက်ပြောင်းကုန်ပြီနှင့်ငြီးငွေ့နာရီ, ခါးသီးမှု၏အပိုအပေါ်ယံလွှာကိုဖယ်ရှားပစ်ရ။ ပြီးနောက်တစ်နှစ်ခွဲ-ပွင့်လင်းမီးဖိုတဖို၌နှစျနာရီအခြောက်လှန်း။
အခွံ - 450 ဂရမ်;
ရေ - 7.7 ဌ;
သံပုရာဖျော်ရည်ကို - 40 ml ကို;
powdered သကြား - 20 ဂရမ်,
ဆား - 20 ဂရမ်
10 မိနစ်ရေအေးနှင့်အနာစိမ်းများ 2.5 L ကိုအတူကိတ်မုန့်ဖြည့်ပါ။
ရေကိုအစားထိုးပါ, ဆား၏ 10 ဂရမ်ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်အတူတူပင်ချက်ပြုတ်။
ရေနဲ့သကြား 250 ml ကိုတစ်ရည်အတွက်ထား strips တွေ, သို့ကမ္ဘာအပေါ်ယံမြေလွှာ Cut နှင့်နာရီချက်ပြုတ်။
မီးဖို၏အလျင်မြန်ဆုံးသည့် candied လိမ္မော်ရောင် peels ခန်းခြောက်။
ဘာမျှအပေါ်ယံလွှာကနေထမင်းချက်ကာကွယ်ပေးသည်ပေမယ့်အစဉ်အလာ, candied လိမ္မော်ခွံ, အမှုန့်သကြားနှင့်အတူဖြန်း ချောကလက်အချိုပွဲ ။ အထူးသဖြင့်ချောကလက်၏ခါးသီးမှုကြမ်းတမ်းနှင့်အဆင့် cloying သကြားလုံးအလေးပေးဖို့တတ်နိုင်သောကွောငျ့။ ထိုအခါကအားလုံးအရသာဦးစားပေးပေါ်တွင်မူတည်သည် - candied အသီးလုံးဝဖြစ်သို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းချောကလက်ဖြည့်နိုင်ပါတယ်။
အခွံ - 600 ဂရမ်;
ချောကလက် - 250 ဂရမ်;
သကြား - 1 ကီလိုဂရမ်;
ရေ - 2.5 လီတာ။
10 မိနစ် strips တွေရေနှင့်အနာစိမ်း 500 ml ကိုသွန်းလောင်း။
သကြားရေ 250 ဂရမ် 1 လီတာထဲတွင်ပျော်ဝင်, 20 မိနစ်အခွံနှင့်အနာစိမ်းထားတော်မူ၏။
15 မိနစ်သကြားနှင့်အနာစိမ်းတစ်ခုထပ်တိုး 250 ဂရမ်မွှေပေးပါ။
ချောကလက်အရည်ပျော်သူတို့ကို candied သွန်းလောင်း။
ချောကလက်ခွောကျသှေ့နှင့်အတူသကြားလုံးလိမ္မော်ရောင် peels ချန်ထားပါ။
Candied ခြောက်လိမ္မော်ခွံ - စာရွက်
အတော်များများကအိမ်ရှင်မလုပ် သကြားလုံးခွံ ဟောင်းကိုထိတ်ကနေလိမ္မော်သီး။ သိုလှောင်မှုခွံစဉ်အတွင်းတောင့်တင်း, ကြွပ်ဆတ်ခြင်းနှင့် overdried အသွင်အပြင်ဝယ်ယူနေသောကြောင့်ဤသည်ချက်ပြုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်, ယခင်သူတွေကိုထံမှကွဲပြားခြားနားသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သူတို့ကအစိုဓာတ်ကို evaporating, သကြားနှင့်ရေမရှိဘဲ tomyat လောင်းဖြစ်လျှင်, စင်ကြယ်သောရေ၌စိမ်အရည်နှင့် triply provarivaya ပြည့်နေပါသည်။
ရေ - 5.5 လီတာ;
အခွံ - 300 ဂရမ်;
သကြား - 300 ဂရမ်
မိနစ် 30 အဘို့ရေ 1 လီတာအတွက်မတ်စောက်သောကိတ်မုန့်။
, strips တွေသို့ Cut တစ်နာရီရေနှင့်အနာစိမ်း 1.5 လီတာကိုငါသွန်းလောင်းရေကိုနေ့စဉ်မိနစ် 20 ပြောင်းလဲနေတဲ့။
ရေယိုစီးမှု, သကြားအတွက်ဖြန်းခြင်းနှင့်ရေမရှိဘဲမိနစ် 40 မျှတည်ထားပါ။
အဆိုပါမိုက်ခရိုဝေ့ထဲမှာ Candied လိမ္မော်ခွံ
ရှည်လျားသော candied လိမ္မော်ခွံအဘို့ဂန္စာရွက်, အမြန်ဆုံးနေဆဲနာရီပေါင်းများစွာကြာနှင့်မိုက်ခရိုဝေ့လက်ကိုင် 25 မိနစ်ဆက်ဆံပါ။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, မိုက်ခရိုဝေ့ချက်ပြုတ်နှင့် zest စေနှင့် candied အသီးအပွအခြောက်နိုင်ပါတယ်။ မင်္ဂလာပိုင်ရှင်တွေသာခွံ 10 မိနစ်ဘို့ရေကိုပွက်ပွက်ဆူနေသောထဲမှာစိမ်နိုင်ပါတယ်။
အခွံ - 350 ဂရမ်;
သကြား - 180 ဂရမ်;
ပွက်ပွက်ဆူနေသောရေ - 700 ml ကို။
10 မိနစ်များအတွက် strips တွေကျော်ပွက်ပွက်ဆူနေသောရေကိုလောင်း။
ရေစစ်ထုတ်ဖို့အတွက်, 700 watts ကမှာ6မိနစ်တစ်မိုက်ခရိုဝေ့ထဲမှာသကြားနဲ့ထမင်းချက်၏ 90 ဂရမ်ထည့်ပါ။
Dosypte သကြားနဲ့ action ကိုပြန်လုပ်ပါ။
ကျွန်မအိမ်လုပ် candied အသီးကိုဘယ်လိုသိုလှောင်သလဲ?
ထုတ်ကုန်များ၏သက်တမ်းတိုးမြှင့်ဖို့ကူညီအိမ်တွင်သကြားလုံးအသီးတွေကိုသိမ်းဆည်းဖို့မည်သို့အသိပညာ။ ဒါကြောင့်ချိုမြိန်ရည်အတွက် candied အသီးမှကြွလာလျှင်မှောင်မိုက်အရပ်၌၌၎င်း, - - ရေခဲသေတ္တာထဲမှာလူအတော်များများသကြား-coated ထုတ်ကုန်အကောင်းဆုံးကို, လုံကွန်တိန်နာထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ရပါမည်ကိုငါသိ၏။ သူတို့ကိုယ်သူတို့ unpretentious candied, ဒါပေမယ့်အနည်းငယ်နေဆဲအကောင့်ထဲသို့ပရိယာယ်ကိုယူသင့်ပါတယ်။
Store ကိုကောင်းစွာဝက်အူထုပ်နှင့်အတူတစ်ဖန်ကွန်တိန်နာအတွက်ဖြစ် candied ။
Icing နှင့်အတူ Gingerbread က - စာရွက်
အိမ်မှာ glaze ဒိန်ခဲ - စာရွက်
ဘီစကွတ် "လို, Barneys လို"
အဘယ်အရာကိုတစ်ဦးဘိုးလင်းလမ်းကြားမှ Wear သလော
ဖက်ရှင် swimsuits - နွေဦး-နွေရာသီ 2014
မင်းသားချားလ်စ်a"ကို standby" ... ကျော်ကို 59 နှစ်အတွင်းပါ!
ထိုအရပ်ကို buzz စကားလုံးများကိုအပေါ်တစ်ဦးလူသထားရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
ကင် - စာရွက်
ပန်ဒိုရာရဲ့ထောင့်ကွက် - ပန်ဒိုရာရဲ့ box ထဲမှာကားအဘယ်သို့, ထိုသို့အဘို့အဘယ်သို့ဖြစ်သနည်း
Meghan Markle ပြီးသားဗြိတိသျှ၏စိတ်နှလုံးကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့သလဲ